New fitsapana mampiasa iray ny ra mitete ny hanambara tantara iray manontolo ny niparitaka be aretina - News Fitsipika
New fitsapana mampiasa iray ny ra mitete ny hanambara tantara iray manontolo ny niparitaka be aretina
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “New fitsapana mampiasa iray ny ra mitete ny hanambara tantara iray manontolo ny niparitaka be aretina” nosoratan'i Iana Sample Science mpamoaka lahatsoratra, fa The Guardian ny alakamisy 4 Jona 2015 18.00 UTC
Mpikaroka no Lasa mora sy haingana fitsapana izay mampiseho ny olona iray ny tantaran'ny feno aretina niparitaka be avy amin'ny iray ny ra mitete.
Dia mamela ny fitsapana dokotera mba hamaky avy ny lisitry ny ny virosy izay tsimokaretina, na mbola hanan-kery eo, ny marary na dia tsy nahatonga misy mazava soritr'aretina.
Ny teknolojia dia midika fa afaka ahantòny marary GPS ho an'ny rehetra ny virosy afaka infecting olona. Mety hanova ny mamantatra ny lehibe aretina toy ny hépatite C sy ny VIH, izay ny olona dia afaka mitondra an-taonany maro tsy mahalala.
"Raha ny mahazatra, rehefa dokotera te ho fantatra raha olona iray no voan'ny ny otrik'aretina, tsy maintsy maminavina izay ny otrik'aretina dia, ary avy eo dia mitady manokana an'ireo izany otrik'aretina,"Hoy Stephen Elledge, izay nitarika ny tetikasa ao amin'ny Brigham sy ny vehivavy ny Hopitaly any Boston.
"Mety hitarika ho amin'ny famantarana aretina izay mandeha isan-taona ny olona ny dokotera sy hahazo ny tantara niparitaka be ao. Mety hahita niparitaka be tokoa aretina izay lehibe sy ny marary tsy nahalala nananany,"Hoy izy.
The (£ 16) fitsapana mitaona ny fandrosoana eo amin'ny synthetic biolojia sy haingana sequencing fototarazo mba handinika bebe kokoa noho ny 1000 karazany ny olombelona virosy amin'ny iray mandalo. Mandrak'izao, fitsapana ny ankamaroan'ny no nitady otrik'aretina ihany no iray isaky ny mandeha. Elledge Tombanan'ny ny fitsapana farany, antsoina hoe VirScan, afaka ny fandraisana 100 levitra in roa na telo andro.
Related: IZA ankasitrahany 15 minitra fitsapana ho an'ny Ebola
Ny fitsapana hararaotina ao ny zava-misy fa ny hery fiarovana manao mpisetra iadiana amin'ny virosy isaky ny vatana lasa aretina. Ireo dia afaka miaina amin'ny hery fiarovana ao amin'ny lalan-dra mandritra ny taona maro, ary na dia am-polony taona.
Mba hampitomboana ny fitsapana, Elledge hoatr'izany jazakely ny antontan-tsy mampidi-doza virosy mba hitondra potika ny proteinina avy amin'ny olombelona virosy teny an-surfaces. Raha atambatra, dia nitondra proteinina avy mihoatra noho ny 1000 karazany ny 206 karazana virosy fantatra mba hanan-kery eo ny olona. Mpisetra mampiasa proteinina ireo sombina mba manaiky nanafika virosy sy handefa ny fanafihana.
Raha misy droplet ny ra avy amin'ny marary no voaharo ny farany virosy, misy hery fiarovana izy ireo latch eo amin'ny olombelona izy ireo proteinina otrik'aretina hanaiky toy ny mpanafika. Ny mpahay siansa dia hanaisotra ny hery fiarovana sy hamantatra ny olombelona avy amin'ny proteinina virosy sombintsombiny izy ireo nifikitra ho.
"Io no fotoana voalohany efa no afaka mijery amin'ny fomba manavakavaka tanteraka amin'ny firy virosy no infecting ny olona, ary afaka manao izany ho fantatra rehetra virosy,"Hoy Elledge. Ny fitsapana mitondra ny hery fiarovana olona iray mahatonga avy amin'ny vaksiny, fa izao kosa no azo ariana avy amin'ny Hita tamin'ny fandinihana natao. Details no voalaza ao amin'ny gazety Science.
Tao anatin'ny fampisehoana ny teknolojia, ny ekipa avy nanadihady ra 569 ny olona any Etazonia, South Africa, Thailand sy Però. Ny fitsapana nahita fa, eo ho eo, ny olona efa mitondra ny tsimokaretina 10 karazana virosy, na dia olona roa farafahakeliny ao amin'ny fitsarana nisy tantara ny 84 aretina avy amin'ny karazana virosy.
Ny tena mahazatra Herpes aretina ireo virosy, izay mahatonga mangatsiaka fery, enteroviruses izay hampahatezitra stomaches, gripa, ary rhinoviruses izay hiteraka iombonana sery. Ireo izay efa za-draharaha amin'ny Etazonia vitsy aretina noho ny any amin'ny firenen-kafa, ary araka ny nampoizina, nanan-karena be ny olona be taona tantara niparitaka be noho ny tanora.
Ny fitsapana mety hitondra tombontsoa ho an'ny taova lehibe taova marary. Olana iray izay afaka manaraka taova fandidiana dia ny tsy ampoizina reawakening ny virosy izay lurked tsy mavitrika ao amin'ny marary na ny mpamatsy vola nandritra ny taona maro. Mety hiverina ireo virosy manan-kery, rehefa marary ny hery fiarovana no foanana amin'ny zava-mahadomelina mba hanakanana azy ireo mandà ny taova. Standard fitsapana matetika no tsy maka miseho virosy alohan'ny fandidiana, fa ny fomba VirScan afaka manambara ny fanatrehany sy ny mpitsabo sy ny marary mailo amin'ny loza.
"Mety ho tena sarobidy,"Hoy Iwijn De Vlaminck, ny biomedical injeniera ao amin'ny Cornell University in New York, izay tsy nandray anjara tamin'ny fianarana. "Inona izany dia mamela anao hanao dia handinika ny lasa ka refeso ny olona iray ny fifandraisany velively tamin'ny teo aloha aretina. Izany no manan-danja tombony, satria dia afaka mamantatra ireo aretina, an'izay mandeha latency. Afaka tombantombana ny ra avy amin'ny marary sy ny taova ao amin'ny mpamatsy vola indrindra izao fomba malalaka sy mety ho avy mialoha olana amin'ny nalaza nandrafitra. "
Mino ny mpahay siansa koa ny fitsapana hatsipy mazava mikasika ny fomba sasany dia afaka predispose aretina niparitaka be ny olona mba toa tsy misy ifandraisany aretina any aoriana any. Misy aretina mety hahatonga fahavoazana maharitra ho vatana sela, na manova ny hery fanefitra, amin'ny fomba izay mamela ny olona bebe kokoa amin'ny olana ara-pitsaboana mety, rehefa lehibe izy ireo. Ohatra, aretina amin'ny Epstein-Barr otrik'aretina dia afaka manarina ny mety ny homamiadana. Ahoana anefa no vokany eo amin'ny hafa virosy lavitra ezaka ara-pahasalamana dia lavitra murkier. "Izany karazana fanadihadiana ity dia zavatra tena mahatonga azo atao,"Hoy Elledge.
Climate ny mpahay siansa Hodi-kazo Up The Big Tree
Apple Nanampy tondro Scanner an'i New iPhone?
17447	0 Sida sy VIH, Article, Mpikaroka sy ny molekiola ao amin'ny zavamananaina, Haiaina, hepatita C, Iana Sample, fitandremam, Main section, Medical fikarohana, Science, The Guardian, UK vaovao
← Ahoana masonao hamadika ny hevitrao Ny ambony mpamono olona efatra ankehitriny any andrefana →